Ilkaha caddeeyo | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "ilkaha caddeeyo"
Waxaa jira alaabooyin badan caddeeyo waxaa kaa caawin kara in aad ka takhalusaan Wasaqda ama ilkaha huruud ah. Waxaad ka heli doontaa strips caddeeyo, saxaarad la whitener ama caddeeyo strips buuxiyeen. hababka Kuwani waa dhan kale weyn u caddeeyo xirfadeed qaali.
Jordgubbe loo isticmaali karaa sida hab dabiici ah u caddayn ilkaha. The xeryahooda dabiiciga ah laga helo ee strawberries caddeeya aanu u caddayn doonaa ilkaha oo aan la isticmaalayo kiimikada. Waxaad Fook karaa strawberries galay koollada ah in aad cadaydo karaa on ilkaha ka dibna ha fadhiisto dhowr daqiiqo ama laga gooyay strawberry a qeybtii, ka dibna waxa xoqin gal ilkaha yar a.
TALO! Miraha waa hab fiican oo dabiici ah ilkaha u caddayn qaar ka mid ah waqtiga. Tusaale ka mid ah miraha qaar ka mid ah in shaqeeyaan weyn ugu caddeeyo ilkaha noqon lahaa strawberries iyo liinta.
Hubi in ilkaha waxaa la xidhhidha nadiifiyaa hor inta aadan isticmaalin guriga caddeeyo mudada ilkaha. Caddeeyo waxyaabaha ilkaha shaqayn doonaa sida ugu fiican haddii aad u codsan on ilkaha nadiif ah. Haddii ilkahaaga aan daahirka ahayn marka aad bilowdo in ay u caddayn jirto fursad fiican in natiijada waxaa laga yaabaa in aan sinnayn iyo dareemi.
Ilkaha caddeeyo strips yihiin ballaaran la heli karo iyo la awoodi karo heer sare ah. Waxaad si fudud u baahan tahay inaad meel strip ku ilkaha, ka dibna waxa uu ka tago halkaas muddo waqti cayiman sida ay nadiifiyaa iyo whitens ilkaha. Marka loo jecel yahay, strips caddeeyo ayaa laga badiyay nimco badan sababtoo ah natiijada ay masaakiinta.
TALO! waxyaabaha ilkaha caddeeyo waxay ka dhigi laga yaabaa in ilkaha xasaasi u ah sheyga aad isticmaalayso. Waa xanuun badan inkasta oo waa ku meel gaar ah oo kaliya.
Waxaad u baahan tahay in aad u taxaddar marka cunaya ama cabaya ka dib markii la caddeeyo ah nidaamka ilkaha sameeyey. Ilkahaaguna is wasakheeyey doonaa si fudud u nuugo Wasaqda ka dib markii ay la caddadeen. Waxaa muhiim ah in laga fogaado cuntooyinka midab madow iyo cabitaanka ka dib markii aad ilkaha cusub Nuuri. Coffee waa tusaale ka mid ah wax si fudud loo nuugo doonaa by ilkahaaga iyo waxay keeni kartaa midab.
Waxa ugu muhiimsan in aad samayn karto si aad u hesho dhoola yaab leh oo cad waa in ilkaha for nadiifinta caadiga ah inay tagaan. Hubi si ay u tagaan, waayo, a kasta oo nadiif ah 6 bilood. Had iyo jeer xasuuso inaad qabsato ballan cusub halka dhakhtarka ilkaha si aadan mar dambe illoobin. Weydii xafiiska ilkaha inay ka hor idin xusuusiyo la telefoon ah.
TALO! Caday ilkaha ka dib cunto kasta waa hab fiican si ay u sii xor ka Wasaqda. cuntooyinka iyo sharaabka badan ayaa awood u leh in jebiyo ilkaha.
Qaad caday yar in aad isticmaasho ka dib cunista cuntooyinka sonkorta leh. macmacaanka Kuwani eekaan ilkaha, oo waxaan ka dhigi xayd ama ku daro waxa laga yaabaa in aad horey u. Ka dib cunista macmacaan ah, cadaydo ilkahaaga for qadar gaaban. Cajiinka ilkaha ma loo baahan yahay; kaliya xoqin ilkaha, ka dibna si fiican u raaci biyo.
baking soda, marka la isku daro haydarojiin, foomamka cadayga tayo leh in hoos u bakteeriyada iyo tiraa Wasaqda. Isku day cadayashada ilkaha xal u dhexeeya 5-10 daqiiqo. Had iyo jeer ka taxadartaa in aadan cadayashada dhigin mid adag, sida isku dar ah run ahaantii ka cadhaysiin kartaa ciridka.
TALO! Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si loo hubiyo in ilkaha sii cad waa in la dhigay ilaa ballamaha joogto ah booqashada dhakhtarka ilkaha si ay u nadiifiso. nadiifinta xirfad oo kaliya tirtireyso karaa sano ilkeed-urursiga iyo midab.
Haddii ilkaha bilaabaan jidhidhico ama dareemaan xasaasi ah marka la isticmaalayo alaabta a in whitens ilkaha, isticmaalka dayn isla markiiba. laga yaabaa in aad samaynaysaan dhaawac ka badan aad ogtahay in ilkaha, sidaa daraadeed waxa ugu fiican ee dhibic in si aad u hesho talo xirfadeed. Waydii dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan fursadaha aad.
TALO! findhicilashada joogtada ah iyo sida burushka aad ilkaha ka mid ah hababka ugu guulaha badan caddeeyo ilkaha. By isticmaalaya farsamooyin kuwan, aad hoos u dhigi doontaa marag kacayso huurada, sababta ugu weyn ee midab ilkaha.
Had iyo jeer raac tilmaamaha oo dhan ee ku saabsan waxyaabaha la caddeeyo guriga aad isticmaasho. Tani ciridka iyo dhaawac aad u ilkahaaga teeth.Use caddeeyo waxyaabaha saxda ah oo kaliya keeni kartaa cuncun sida baray on saaraha.
Ka dib marka aad mari ilkaha ah caddeeyo nidaamka, waxaa muhiim ah in aad cadaydo ilkahaaga ka dib kasta oo hadhuudh ah. Haddii aad ha cunto dhiso on ilkaha, waxay sababi kartaa koritaanka bakteeriyada afkaaga. Bakteeriyada jilciso kartaa ilkaha, taas oo ka dhigi kara kuwo u nugul dhaawac oo sii xumaaneysa.
TALO! Ka fogow sigaar, qaxwada iyo shaaha xoog. Waxyaalahaasu waxay ka leexin kara ilkahaaga brown.
Cabitaanka qaxwada iyo cabitaanno kale xayd geey waa hab wax ku ool ah helitaanka ilkaha caddaan. caws engegan oo kale wuxuu ku siinayaa qadarka wakhti in la keeni ilkaha xayd. dareeraha ah ayaa la dhaafayo doonaa ilkaha oo si toos ah u dhaco hoos afkaaga.
Ku rid juice strawberry on caday iyo burush sida caadiga ah in ay u caddayn ilkaha. acid ayaa ka juice jilcin ama aad dhaldhalaalka iliga, sidaas aad awood u nadiifiso badan ee midab ka ilkaha. Waxaad yeelan doontaa in ay soo celin dhoolla million-dollar, waayo ilaa hadda in ka yar hal milyan oo doolar la isticmaalayo habkan.
TALO! Ka dib markii la caddeeyo ilkaha, codsan Vaseline inaan idin xusuusiyo in ay sii dhoola. Waxaa laga yaabaa in aysan haysan dhadhan wanaagsan, laakiin waxaa inoo wanaagsan ee la abuurayo go'doomin ku siinaya ilaalinta ilkaha ka xayd for dhowr saacadood.
Caday ilkaha si joogto ah si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad sii dhoola weyn. Cuntada iyo waxyaabaha kale ee ay dhisi karaan ilkaha oo ku wada wasakheeyey muddo ka dib. Ma aha in aad u leeyihiin in ay isku dhibin oo ku saabsan midab ilig inta aad sii wado si joogto ah caadiga ah si joogto ah ilko-cadayashada.
Iska ilaali isticmaalka luqluqdo midab. luqluqdo Kuwani bedelo laga yaabaa in aad neefta, laakiin waxa ay u badan tahay wasakheeyey ilkaha ee geedi socodka. Khamriga waa qayb ah ugu, iyo in waxyeelayn kara carrabka iyo ciridka oo la nuugo karaa galay aad dhiiga.
TALO! Waxaad ilaaliyo ilkaha by iyaga cadayashada. Waxaad sidoo kale waxay qaadan kartaa tallaabo dheeraad ah, iyo bilaabin isticmaalka daawada cadayga ah oo whitens ilkaha.
Waxa kale oo ay keeni kartaa xasaasi ah oo dheeraad ah u nugul xayd.
La hadal dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan siyaabaha caafimaadka si caddeeya aanu u caddayn ilkaha ka hor inta iibsashada wax. Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu ogaan doonaa waxa kala doorashooyinka u fiican yihiin halkaas, oo isaga ama iyada oo sidoo kale awood u yeelan doonaan in ay kuu sheegaan oo ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca ee la xidhiidha nidaamyada qaar caddeeyo ilkaha.
TALO! Caado ka dhigo of floss aad. Findhicilashada qalabka in ay ka saareen huurada, kaas oo keena arrimaha midab leh ilkaha.
Haddii afkaaga bilaabo dhaawicid, si degdeg ah u joojiyaan caddeeyo. Haddii aad isku aragto dareen halka isticmaalaya waxyaabaha caddeeyo, waa in aad si deg deg ah u joojiso isticmaalka alaabta dembiga ilaa aad arrinta kala hadli kartaa dhakhtarka ilkaha.
Waayo, ilkaha caddaan, ma shaaha ama kafeega cabbi. cabitaanka Kuwani discolor ilkaha. Haddii aad ahaayeen in la cabbo qaxwaha, Hubi in aad ka soo afkaaga isla markiiba ka dib marka aad biyo raaci waxaa lagu sameeyey. Tani waxay kaa caawin kartaa hoos wax saameyn xun cabitaanka waxay leeyihiin on ilkaha.
TALO! Isku day in aadan cunin liinta haddii aad rabto in aad ilkahaaga si loo eego caddaan. Intaa waxaa dheer, fogaado juice ee liinta.
La hadal habka ilig caddeeyo a. Ha u caddayn ilkaha ka dib markii is fiiriyaa godadka ama wax shaqo ilkaha.
Waa in aad u shiiddo caleemo bay qalalan iyo qolofka orange budeeyey ah. biyo dar budo iyo burush isku dhaf this. Arintanina waxay sidoo kale kaa caawin doontaa in looga hortago cudur cirrid iyo suuska.
TALO! Isticmaal walnut geed jilif si caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Qaado xoogaa yar oo jilif iyo noqonto on ilkaha.
Isticmaal hydrogenperoxid in caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Waxaad ku samayn kartaa si fudud by darsatid lagu dhaqo ama wax suuf kasta koosaarta u galay xalka. Xoq maro qoyan ka badan meelaha of ilkahaaga si joogto ah. haydarojiin wuxuu ka caawiyaa Wasaqda ugu celinnaa iyo maro dhaqidda noqon doona scrubber a.
daawooyinka dabiiciga ah Qaar ka mid ah ka caawin doonaa ilkaha caddeeya, sida khal cider tufaax. Habka Tani waxay ka caawisaa baabi'iyo bakteeriyada iyo Wasaqda afkaaga, sida ay nadiifiyaa ilkahaaga ee geedi socodka. Luqluqo hal mar maalintii, guud ahaan subaxdii, oo khal cider tufaax ah, iyo waxa ay dabagal by cadayashada ilkaha.
TALO! Caday ilkaha cusbo. Cusbadu waa dawo ah in uu yahay dabiici ah oo kartaa caawin takhaluso Wasaqda on ilkaha.
cabitaanka si tartib-keenaya Chase biyo. muraayad A ee lagu luqluqdo biyo ka hortagtaa Xumaan ka dhigayaa keenaya cabniinka. fikrad kale waa in la isticmaalo caws engegan oo kale ah marka la cabo cabitaan mugdiga-midab.
Caday ilkaha la diirka muuska ah. nidaamka Tani waa mid aad u fudud oo jaban, si aad u hirgelin karaan aad ku buuxinaysid jadwalkaaga maalin kasta. Marka aad u foojignaadaan moos ah, ordi diirka ka badan ilkaha oo kaliya ka hor inta aadan iyaga cadaydo. Ka dib markii this samaynaya, cadaydo ilkahaaga sida aad sida caadiga ah ay doonaynin. Tani waxay ku siin doonaa natiijada caddeeyo degdeg ah.
Isticmaal kooxda jilicsan diirka liin ayaa ah in laga takhaluso of Wasaqda iyo ilkaha dhigi. Waxa kale oo aad qasan kartaa qalajiyey diirka liin leh bay Barandho dhulka ka dhigeysa in la sameeyo, Jinka ah ilkahaaga. Hubi inaad afkaaga biyo raaci si fiican afterwords in meesha laga saaro oo dhan sonkor midhaha.
Innaba ha maqlina cadayga kasta oo ku andacooday in ay idin siin doonaa ilkaha caddaan. Waxay ku siin karaan saamayn caddeeyo yar, laakiin ay ogaadaan in farsamooyinka dheeraad ah oo laga yaabaa in loo baahan yahay. Haddii aadan weli dooran in aad isticmaasho daawada cadayga ah caddeeyo, loo hubiyo in aad hesho mid ka mid ah in uu leeyahay baking soda waa in.
Waydii dhakhtarkaaga ilkaha si ay kuu siiyaan gel ah loo isticmaali karo guriga si ay u caawiyaan caddeeya aanu u caddayn ilkaha eegi caddaan. Farsamadan ilkaha ka dhigi kartaa by ilaa sideed midabo!
Haddii aad isku dayayaan in ay hesho ilkaha caddaan, u tag dhakhtarka ilkaha si uu u nadiifin sidii ay marar badan aad awoodo. nadiifinta ilkaha oo joogto ah waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad ka mid noqon kara in aad la caddeeyo ee mudada ilkaha. Waxaad u baahan tahay inaad soo booqato dhakhtarka ilkaha for nadiifinta bilood ugu yaraan lix.
Waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in aad leedahay caday saxda ah si fiican u cadaydo nooca ilkaha. cadayga korontada ah waa gaar ahaan wanaagsan at fogeynayo huurada iyo Wasaqda wxbarashada on ilkahaaga maalin kasta. Tani waxay yeelan doonaan ilkaha si dabiici ah nadiifinta iyo caddaan.
Waa in aad u nadiifiso iyo caddeeya aanu u caddayn ilkaha haddii aad raacdo joogta ah maalin walba la cadayga iyo findhicilashada. Dooro waxyaabaha ay ku jiraan baking soda sida qayb ka caddeeyo sida dabiiciga ah waa heer sare ah wax ku ool ah ee ay ka saareen Wasaqda.
ilkahaaga caddaan Waad haysan kartaa adigoo isticmaalaya oo kale caws buu ka dib markii wax procedure.Drinks caddeeyo heerar sarreeya oo pigments midab in yeeli karaan ilkaha. Isticmaalka caws looga hortago doonaa ilkaha hore ka isagoo xiriir toos ah la kiimikada xayd.
Cun cuntooyin caafimaad leh in ay yihiin callaaliska. abrasiveness ee cuntooyinka callaaliska dar xoog nadiifinta si aad ilkaha marka aad u calaliyo. wuu qaniini oo dhan, ha u googooyey!
Naftaada u samee, Jinka strawberry ah cadaydo. Jordgubbe mudo dheer ayaa la sharfay caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Si qas ilaa Jinka qaar naftaada, waxaad u baahan doontaa 1/4 koob biyo ah, baking soda (1/2 cup) iyo saddex strawberries in la soo shiiday.
Ha cabin sigaar sigarka qoriga ah ama sigaarka. Labada ka mid ah ayaa la caddeeyey inay discolor ilkaha in discolored. Isku day in aad joojiso sigaarka si ay ilkaha ka jeestay jaalaha ah sii. Haddii aad dhibtoonaya inuu ka tago sigaarka, la dhakhtarkaaga talo ama dawooyinka la tasho si uu kaaga caawiyo in habka. Waxaad u baahan tahay badan oo taageero wanaagsan iyo talo adag.
maalmahan, aad dhabtii marmarsiinyo uma haystaan ​​waayo gelinaya la dhoola huruud. Waxaad ka heli kartaa dhoola ifaya adigoo isticmaalaya mid ka mid ah waxyaabaha badan oo ilko caddeeyo oo loogu talagalay isticmaalka guriga. xirmooyinka caddeeyo ayaa waxaad isticmaali kartaa guriga badan ka yar qaalisan caddeeyo nidaamka ilkaha waa, oo ay asal ahaan ku siin natiijo isku mid ah.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 1:02 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: Miraha, strawberry, ilkaha caddeeyo, waxyaabaha la caddeeyo, ilkaha caddeeyo
ilkaha u caddayn , Ilkaha qalab caddeeyo , waxyaabaha Tooth caddeeyo
sidoo kale Helitaanka ilkaha dhaldhalaalaan qurux badan waa riyo ku dhawaad ​​qof walba oo laga yaabo in idinkaa. Haddii ilkaha sii huruud ah ama iin leh xitaa ka dib cadayashada joogta ah la cadayga wanaagsan, Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad isticmaasho mid ka mid ah ka badan xirmooyin ilkaha counter caddeeyo si joogto ah. Waxaa jira farabadan of habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha suuqa iyo sidoo kale online waxaad dooran kartaa. Si kastaba ha ahaatee, dhan oo iyaga ka mid ma isku mid shaqeeyaan caddeeyo ilkaha. Jidka Best in ay u caddayn ilkaha shaqeeyaan si fiican oo dhakhso ah, halka alaabta oo tayo hooseeyo si ay u caddayn ilkaha ma samayn. Isticmaalka ilkaha generic xirmooyinka caddeeyo sida baakidh afka, caddeeyo jel, caddeeyo strips waa fursad wanaagsan u samaynta ilkahaaga caddaan, laakiin xirmooyinka sida inta badan ka tago waxyeellooyin. Taasi waa sababta dad badan ma rabto in aad isticmaasho xirmooyinka sida. Haddii aad tahay mid ka mid ah markaas waxaad dooran kartaa ilkaha guriga caddeeyo sida habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha natiijada fiicnayn oo degdeg ah.
Waxaa jira sababo badan, taas oo ka dhigi kartaa ilkaha discolored. sigaarka Sigaar, tobaakada la calaliyo, cabbo khamri ah cas, soda, shaaha iyo kafeega ka dhigi kartaa ilkaha discolored. Sidaas, si ay u sameeyaan ilkaha caddaan, waa in aad ka tago caadooyinka sida ugu horeeyay. Geedi socodka dabiiciga ah ee gabow iyo qaar ka mid ah daawooyinka sida supplements birta, vitamin supplements, iyo antibiotics qaar ka mid ah ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara midabka ah ee ilkaha. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid sahlan, deg deg ah oo habka ugu fiican si ay u caddayn ilkaha daawooyinka.
Jidka Best in ay u caddayn ilkaha
Waxaad isticmaali kartaa wax soo saarka caddeeyo ilkaha guri in ay yihiin habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha in la sameeyo ilkaha caddaan. wax soo saarka noocan oo kale ah waa qaali ahayn oo si sahlan loo isticmaali. Oo weliba, waxaad isticmaali kartaa waxyaabaha sida aan ilkaha kasta oo xirfad u socday. guud ahaan Xirmada A ilkaha guriga caddeeyo yimaado la strips caddeeyo iyo gel afka. Waxaad u baahan tahay in this ku rid habka ugu fiican si ay u caddayn ilkaha waxyaabaha sida lagu faray on ilkaha natiijo wanaagsan. Haddii aad rabto in aad natiijada ugu filayo, waa in aad sii badeecada kaalinta on ilkaha ka hor inta sariirta aadin habeenkii, ugu yaraan 10 daqiiqo. Sidoo kale waxaad u baahan tahay si ay u isticmaalaan si joogto ah.
wanaagsan kale laakiin qaali habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha doorasho waa in ay soo booqdaan qolkii ilkaha ee. Tani waa jidka ugu dhakhsaha badan ee ilkaha fiican caddeeyo. ilkaha A guud ahaan helo caawimaad ah qalabka bleaching ilkaha ah, laser iftiinka iyo jel ilkaha shubay in saxaarad afka (waa in la xirto ka hor inta aadan seexan) in la sameeyo ilkaha bukaanka caddaan. A ilkaha xirfadle daaweynta caddeeyo laga yaabaa in meel dhexeeya adiga lacag 250 USD iyo 900 USD. Inkastoo ay aad u qaali ah, weli waxay bixisaa natiijada ugu wanaagsan oo raagaya.
Waxaad isticmaali kartaa ilkaha guriga caddeeyo walxaha in ay yihiin habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha in la sameeyo ilkahaaga iin-free. Waxaad isticmaali kartaa baking soda iyo sidoo kale hydrogenperoxid ah in la sameeyo ilkahaaga caddaan. Labada iyaga ka mid ah ay yihiin wakiilada bleaching fiican oo kaa caawin in ay cadeeye ilkaha. baking soda waa hadal haynta ee dabiiciga ah iyo sidaas ka caawisaa in ay ka saarto Wasaqda iyo tartars. Waxaad si gooni gooni ah ama si wadajir ah u isticmaali kartaa adigoo koollada oo ganaax ah oo ka mid ah. Waxa kale oo aad ku rushaysaa kartaa qanjaruufo baking soda on cadaydo halka cadayashada.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:21 AM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha, qolkii ilkaha ee, Xirmada bleaching ilkaha, ilkaha caddeeyo, waxyaabaha Tooth caddeeyo, ilkaha caddeeya